Weligaa mala yaabtay waxa ay dareemeysaa in ay taagni dhexdiisa, ballaaran ku gashid, daaqadaha sawirka weyn sida lashiidey dunida by? Sidee ku saabsan la u nexeen oo ay u hurdo by ruxid ku joogta ee tareen sida hoos trundles track a? safarka tareenka waa hab aad u caadi ah oo gaadiid oo Yurub oo dhan ah, iyo laga yaabee mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ay sidaa u sameeyaan waa via tareen qarsoodiga ah. tareenada Kuwani, kuwaas oo sida caadiga ah baxaan galabtii oo socdaala habeenkii, bixi khibrad aad uga duwan heerarka tababarka safarka. Waxaan soo wada ururiyey tareenada fiican qarsoodiga ah ee Europe kuu. From Italy si France, waa kuwan lixda tareen ee habeenkii Yurub ugu sarreeya.
Top qarsoodiga ah in Tareenku 1: Milan Ilaa Palermo
Haddaad weligaa ku riyoon jirtay inaad ku aragto baadiyaha Talyaaniga, tareen qarsoodiga ah tani waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ay sidaa u sameeyaan. Inkastoo safarka tareenka waxay qaadataa labaatan saac oo bilow ah ilaa dhamaad, tareenka waa si toos ah iyo waxaa jira noocyo kala duwan oo doorasho ee weliba qolalkii hoose qarsoodiga ah. Tigidhada ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa via Thello, kaas oo ka shaqeeya tigidhada sidoo kale Venice.
Haddii aad raadineyso weeyna si loo badbaadiyo lacag, waad dooran kartaa sariir-afar qof ah, taasoo sida nooc ka mid ah doorasho qarsoodiga ah mini. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadineyso weeyna si aad u hesho qaar ka mid halis xidhan-indhaha, Waad dooran kartaa inaad kula qaybsato qolka saddexda qof ah asxaabtaada – ama xataa shisheeyayaal, iyo tigidhka ku kici doonaa under 50 euro. Taasi waa gorgortan darana ah! Haddii aad raadineyso weeyna in ay xaaladda ka sii tamashlaynta, waxa kale oo aad ballansan kartaa hal qarsoodiga ah ee hoos siddeetan euros. Inkasta oo aan waxaad ka heli doontaa wax en goobaha Suite, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato seexashada nabadda qiimo jaban.
safarka Tani arko ta ugu badan ee Italy, sida aad qaadataa Milan jidka oo dhan si ay u caaradda boot ee dalka. Jidka, waxaad heli doontaa xaaqid xirashada xeebta iyo buuraha Tuscany. Kani waa, Dabcan, waxaa intaa dheer in sanamyadii la marqulay ee Rome iyo taariikhdeeda.
Our qaado labaad ee tareenka qarsoodiga ugu fiican Yurub waa mid ka mid ah ka socda Zurich, Switzerland si Hamburg, Germany. Haddii aad raadineyso adeegga tareenka hurdada, aad rabto doonaa si ay u eegaan Nightjet ah. Inkasta oo ay jiraan fursado aan joogsan badan diyaar u tareen this, laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiirsan socday via wadada a in siinayo inaad bedeshaa. baadiyaha waa qurux, iyo tilmaamayaasha tareenka maraya tuulooyin yar oo fara badan jidka, oo ay ku jiraan magaalada Hanover. magaalooyinka Kuwanu waa stop ah iyo sidoo qiimihiisu aad safar haddii aad haysato waqti ku. Ha iloobin views cajiib ah ee Alps-yada midkoodna waad la soo bixi doontaa.
xitaa wanaagsan, mar aad ka dhigay si ay Hamburg aad tahay meel u dhow Berlin. Caasimadda hadda ee Jarmalka waxaa caan ku ah meelaha lagu ciyaaro hudheelkeeda iyo sida ay uga go'an tahay dhaqanka hipster. Ku raaxayso farshaxanka wadada iyo kafee weyn markii aad ka fiirsaneyso hadhaaga la habeeyay ee gidaarka Berlin.
Top qarsoodiga ah in Tareenku 3: Brussels Si Vienna
The tareen Brussels si Vienna qarsoodiga Yurub waa wadada isku xirta caan Belgium inay Austria. Waxay kuxirantahay tareenka aad dooratay, wuxuu shaqeeyaa qiyaastii galabtii wuxuuna yimaadaa aroortii hore, waana afar iyo toban saacadood’ waqtiga safarka. Tani waa inta badan ka sahlan in ay caloosha ka badan, odhan, labaatankii saacadood ee loo baahan yahay tareenka habeenkii laga bilaabo Milan illaa wadada Palermo.
Iyada oo sida qadar gaaban safarka tareenka, ma waxaad u baahan doontaa inaad wali overlong at baabuur lagu qadeeyo, inkasta oo aad runtii ku raaxeysan karto waxyaabaha ay bixiyaan fasallada kala duwan.
Mar alla marka aad joogtid Vienna waad awoodaa waayo-aragnimada dhaqanka kafeega dhabta ah, maadaama Vienna ay si fiican u aasaasay lafteeda xarunta dhexe ee qaxwada Yurub.
wadada Tani waxay caan ku egyahay lix jeer toddobaadkii. Sidoo kale loo yaqaan qarsoodiga ah Caledonian ah, adeegan hurdada wuxuu isku daraa raaxada iyo qiimaha-ku-oolnimada. Waxaad ka heli kartaa heshiisyo ay ka mid yihiin cuntada, cabitaanka, iyo dabcan, Qolka hurdada.
Haddii aad raadineyso weeyna in ay booqdaan London inta aad safarka, aad had iyo jeer dooran karaan in ay ka qaarad Europe qaadan Eurostar. Tani waa habka kharash-ool ah oo fudud si safarka guud ahaan channel ka France in England. Tigidhada ayaa sidoo kale ka soo meelo kale oo laga heli karaa, sida Amsterdam.
In kasta oo safarkan farsamo ahaan aan u qalmin sidii marin tareen hurdo hurdo la hurdo, sababtoo ah ma aysan ka mid ah booska a hurdada buuxa, waxay wadataa dhowr wado maalin walba.
Dhanka kale, Munich waxay hoy u tahay Oktoberfest. iid Tani waxay dhacdaa in ay mid ka mid ah kooxaha ugu cadcad ee waqtiga oo dhan my – waa dhacdo iska tumaya kun a. Iyada oo kumanaan qof oo ka soo qaybgalay sannad kasta oo lagu ogaaaday ee hawlaha ka oo si aad u dooratid, Munich aad bay ugu fiican tahay inay boos ka hesho liiskaaga.
Xusuuso Mudane 6: Copenhagen Ilaa Berlin
Tani waa Xusuuso kale sharafta leh ay sabab u tahay waayo aragnimo tareen qarsoodiga ah nonstandard, laakiin waa kufiican tahay waqtiga si sahlan maxaa yeelay waxaad arki doontaa naftaada adigoo ku dhex wareegaya qaar ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Yurub. Denmark waa isku darka gaar ah ee saamaynta Scandinavian iyo dhulweynaha dhaqan Yurub oo aan la seegay. Wadadku sidoo kale wuu bilaabmayaa goor dhow Malmo, taas oo ah magaalo qurxoon oo la booqdo iyo tan seddexaad ee ugu weyn dalka Iswiidan.
Inkasta oo aan waxaad ka heli doontaa kaabadood hurdada buuxda on tareen this, waxaad kahelaysaa safarka habeenkii ee maalin walba la heli karo. Kuwani waxay kuu ogolaaneysaa in aad in uu ka tago habeenkii oo gaaray subaxdii nasiyey, waayo, maalintii ugu iman. Waayo-aragnimo ugu fiican ee la tareen aan qarsoodiga ah, waxaad ubaahantahay inaad dhigato tikidhka heerka koowaad. tigidhada waxay badanaa la timid dhaaf u kordhay sida Alaabtoodii dheeraad ah, cuntada ka mid ah, iyo khibrad kabitaan oo gaar loo leeyahay.
Markaad safrayso dhan Yurub tareen gabi ahaanba waa lagaa dhacay doorashada. Haddii ay tahay in Scotland ama Spain, Norway, ama Iswidhan, tareenada qarsoodiga ah qaar ka mid ah adeegyada ugu fiican waayo imaanaya subaxdii dambe nasiyey oo diyaar u ah in maalin noqoto. Inta aad leedahay ogaaaday fursadaha aad heli karto, sida huteelka tareenka ama kuwa seexda habeenkii oo dhan waxay tareen Prague dheer, Poland, Lisbon, ama xitaa Moscow, naftaada ku Mannaysanno oo ka dhacay, kuwaas oo tareen qarsoodiga ah lix kooxood ee ugu sareysa Europe halkii. Waxaad ma noqon doonto ka xumahay!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “top 6 Tareennada Hurdada ee Hurdada Qaarada Yurub Loogu Safro” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/sleeper-trains-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#riyo habeen Safarka Yurub NightTrains Tababbarka Hurdada tareen safarka